Ukuphefumula kwe-larynx ezinganeni
Ukwehlisa i-laryngotracheitis noma, ngamanye amazwi, isifo se-larynx yisifo esiyingozi ezinganeni, okuyinto nanamuhla ithatha ukuphila kwezingane eziningi. Lokhu kungenxa yokuthi abazali abaningi balahlekile futhi abazi ukuthi benzeni lapho ingane iqala ukuhlaselwa. Ngakho-ke balahlekelwa isikhathi esiyigugu, futhi isimo somntwana siwohloka kakhulu. Kulesi sihloko, sizoqonda ukuthi singabona kanjani ukugcoba kwe-larynx ezinganeni futhi sinikeze usizo lokuqala.
Ukuqina kwesifo se-larynx kungukunciphisa ukukhanya kwe-laryngeal, okuholela ekuqotheni okuqhubekayo okuqhubekayo. Lokhu kungenxa ye-spasm muscle, i-edema yesikhala se-gingival, noma ukuhlanganiswa kwe-mucus kanye ne-sputum. Ngokuvamile, lesi sifo senziwa ezinganeni ezincane (iminyaka 1-3).
Izimpawu ze-stenosis ze-larynx ezinganeni
Ekuqaleni, kubonakala sengathi ingane ine-ARVI. Kodwa kungakapheli izinsuku ezimbili kukhona umkhuhlane ophezulu, izwi elidumayo kanye nokukhwehlela okukhazimulayo. Izimpikiswano ngokuvamile zenzeka ebusuku. Ingane iqala ukuphefumula kakhulu futhi "ngokuzwakalayo". Inselele enkulu ixhuma. Ingane ihlala ingapheli, isaba futhi ikhale njalo. Isikhumba siphenduka futhi siba nesibhakabhaka. Lesi yisibonakaliso sokuqala sokuthi umzimba awunakho i-oxygen.
Izimbangela ze-stenosis ze-larynx ezinganeni, njengombuso, zikhona izifo ezihlukahlukene ze-rotovirus, kepha izifo ezibuhlungu kanye nezidumbu zangaphandle ku-larynx nazo zingaba. Kukhona nesifo se-cicatricial se-larynx, esivela ekulimazeni kwe-larynx (ukulimala kokuhlinzwa, ukushisa kwamakhemikhali).
Izigaba ze-stenosis ye-larynx
Kunezinhlobo ezine ze-acen stenosis ye-larynx.
Esigabeni sokuqala (isigaba senxephezelo), kukhona ushintsho kwezwi, ukubukeka kokukhwehlela "ukukhwehlela". Ngesikhathi esifanayo, azikho izimpawu zokuntuleka kwe-oxygen. Ngesikhathi sokuphumula, ukuphefumula ngisho.
Esikhathini sesigaba sesibili noma isiteleka sezinxephezelo ezingaphelele, ukugqama kwesikhumba kubonakala, okukhombisa ukungabi nokuphefumula. Ngokuziphuza, amaphiko wephunga lekhala. Ingane iyethusa futhi ivame ukwesaba.
Esikhathini sesiteleka sokukhokha imali, isimo somntwana sihlolwe njengenzima kakhulu. Izindebe ziphenduka okwesibhakabhaka, izintambo. Ukuphefumula kunzima kokubili ukuphefumulelwa nokuphefumula. Ukushaya kwenhliziyo kwehla.
Isimo sokuqatha okukhulu. Isigaba sesine (i-asphyxia) sibonakala ngokuphefumula okungenasisekelo futhi sinciphise ngenhliziyo. I-Cramps kungenzeka.
Ukwelashwa kwe-stenosis ye-larynx ezinganeni
Kungcono uma uqala ukwelashwa ngaphambi kokuba kubonakale izimpawu ezinkulu, khona-ke isimo esingathí sina singagwenywa ngokuphelele. Ingane idinga ukuphuza okuningi nokudla okugaya. Kuzoba usizo ukugcoba isifuba nemilenze. Unganika antipyretics lapho izinga lokushisa likhuphuka. Futhi futhi ngokuphefumula okulindelekile, ama-expectorants asetshenziswa.
Lapho izibonakaliso zokuqala zokuhlasela kwe-stenosis ye-larynx, kuqala zibangele usizo oluphuthumayo. Ngaphambi kokufika kwe-ambulensi, ungesabi futhi ungachithi isikhathi, kodwa usize ingane yakho. Ukwenza kube lula ukuphefumula, umoya oshisayo, omswakama uzosiza (ukungafihli, noma, ekugcineni, uvule umpompi wamanzi ashisayo endlini yokugezela bese uya khona). Kubaluleke kakhulu kulo mzuzwana ukuzolalisa ingane nokunciphisa umsebenzi wokuzivocavoca, lokhu kuzoholela ekujwayelekile kokuphefumula nokunciphisa isidingo se-oxygen. Umphumela omuhle unikezwa ngokuqhuba, okuthiwa, ukuphazamisa ukwelashwa. Geza imilenze yengane (ukushisa kwamanzi 42-45 ° C), faka ama-plaster we-plaster ku-roe futhi uhlale unikeza isiphuzo esifudumele.
Ukuvimbela ukuqina kwesifo se-larynx
Ukuze kuvikelwe lesi sifo, kubalulekile ukunciphisa imvamisa ye-SARS, ukulandela izinyathelo zokuvimbela ngesikhathi sokugula komkhuhlane, ukucasula ingane, nokuqinisa ukuzivikela.
Kungani ingane ihamba ngezinyawo?
Izinwele ezimhlophe zengane
Indlela yokuphatha ukujuluka kwengane?
Kunokuyeka ukuhlanza ingane?
Kungani ukukhishwa kwentloko yengane?
I-ADSM inoculation - okulotshiwe
Ukushisa okuphezulu kwengane - ukuthi benzeni?
I-Acetonemic syndrome ezinganeni
Bifiform Baby - imfundo
Ukwelashwa Kwemithi Yokudla Kwezingane
Kunokuba uphathe ingane ekubonisweni kokuqala komkhuhlane?
I-RoE iyinhlangano evamile ezinganeni
I-Embassy yeVatican eKazakhstan
Ama-eggplant agcwele inyama, aphekwe kuhhavini
Izinkanyezi ezinezinwele ezimfushane 2013
Ungakanani isidingo osidingayo ukuze ukhulelwe?
Izimpawu zothando ngentombazane
Gem kusuka apula ebusika - zokupheka okumnandi vithamini kanye original billet
Izingubo zokugqoka zonyaka ka-2014
Wedding umgexo kusuka ubuhlalu
Indlela yokuheha imali endlini - izimpawu zabantu
Ukwakhiwa kwegumbi lomfana osemusha
I-Zara - iqoqo elisha le-2015
Izinhlanzi ezithosiwe ku-batter
Ukukhipha isisu kubonakala kanjani?
Izinhliziyo zenhliziyo kaTamatato Bull kanye nemininingwane yemithetho ehlukahlukene, ekhulayo
Izembatho zasebusika ziyizibonelo ezinhle kunawo wonke kuzo zonke izikhathi
Isibalo seMerlin Monroe - uphawu lobulili lwekhulu lama-20
Ukugcoba inyama yenkomo
Amaqebelengwane angama-curd e-molds ayi-silicone
Ukulungisa ukugoba ngezinwele ezinde